Ny fitambarany sy ny singa fototra
“Ary Andriamanitry ny fahasoavana rehetra, izay efa niantso anareo ho any amin’ny voninahiny mandrakizay ao amin’i Kristy, rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo, dia Izy no hahatanteraka sy hampiorina ary hampitoetra anareo. “1 Pet. 5:10
Rehefa voaray ny fahamarinana , dia hiteraka fanovana ifotony ao amin’ny fiainana sy ny toetra; fa ny fivavahana dia midika ho fitoeran’i Kristy ao am-po, ary eo amin’izay misy Azy, ny fanahy dia handroso amin’ny hetsika ara-panahy, mitombo hatrany amin’ny fahasoavana, mandroso hatrany ho amin’ny fahatanterahana (...)
Moa ve ianao mitombo ao amin’i Kristy, ilay loharano velona? Moa ve miseho eo amin’ny fiainanao ny fahasoavan’i Kristy? Nanome ny fahasoavany ho an’ny olona Andriamanitra, mba hanirian’izy ireo bebe kokoa ny fahasoavany. Ny fahasoavan’Andriamanitra dia miasa hatrany eo amin’ny fon’ny olona, ary rehefa voaray izany, ny vokatry ny fandraisana izany dia hiseho miharihary eo amin’ny fiainana sy ny toetran’izay itoerany (...). Ny fahasoavan’i Kristy ao am-po dia hampiroborobo mandrakariva ny fiainana ara-panahy ary ho vita ny fandrosoana ara-panahy. Tsy hitantsika ny fitomboan’ny zava-maniry eny an-tsaha, nefa azontsika antoka fa mitombo izy ireny, ary mety tsy ho fantantsika koa ve ny tanjaka sy ny fitomboantsika ara-panahy?
Ny fitambarany sy ny singa fototry ny fahasoavana sy fanandramana kristianina iray manontolo dia ao anatin’ny finoana an’i Kristy, ao amin’ny fahalalana an’Andriamanitra sy ny Zanany lahy izay nirahiny. Saingy eto indrindra no tsy ahombiazan’ny maro, satria tsy ampy finoana an’Andriamanitra izy ireo. Raha tokony haniry ny hifandray amin’i Kristy amin’ny fandavan-tenany sy ny fanetren-tenany izy, dia aleon’izy ireo mikatsaka ny fahambonian’ny tena (...)
Endrey, raha mba tia Azy tahaka ny nitiavany anao ianao, dia tsy handositra fanandramana iray ao amin’ny fijalian’ny Zanakalahin’Andriamanitra! Rehefa mibanjina ny fanetren-tenan’i Kristy isika, mahita ny fandavan-tenany sy ny fanaovana sorona ny tenany, dia ho feno fitalanjonana amin’ny fanehoana ny fitiavana avy any ambony ho an’ny olombelona meloka. Rehefa antsoina mba handalo fitsapana izay mampietry noho ny amin’i Kristy isika, dia tokony hiaritra azy ireny amin’ny fahalemem-panahy, fa tsy amin’ny fimonomononana noho ny ratra, na ny fanoherana ratsy. Tokony haneho ny fanahy izay tafatoetra ao amin’i Kristy isika.
Natao hilanja ny ziogan’i Kristy isika, hiasa toy izay niasany mba ho famonjena ireo izay very; ary ireo izay mandray anjara amin’ny fijaliany dia ho mpiombona amin’ny voninahiny koa.